Isimo seholidi nabangane - kuhlinzekwa ngoNyaka Omusha ojabulisayo.
Okunye Imisebenzi yokuzilibazisa
Isimo seholide nabangani
Imiqondo embalwa yokugubha uNyaka Omusha nabangani
Unyaka Omusha uthathwa njengeholide lomndeni, kodwa abantu abaningi bahlangana naye kanye nomndeni wakhe nabangani bakhe. Ngempela, akukho lutho olungalungile ngokugubha iholidi embuthaneni omncane wabantu abaseduze kakhulu. Futhi ukuze ujabule futhi ujabulise ngokwengeziwe, ungahlela into ekhethekile, kumnandi futhi ayikhunjulwe. Yiqiniso, kumele uqale ukhethe umhleli. Woza ekukhethweni okujulile futhi ngokuzithandela, ngoba lo muntu ophathiswe umthwalo omkhulu wokujabulisa izivakashi futhi wenze u-Eva Wonyaka Omusha ungalibaleki.
Isimo esifushane soNyaka Omusha wekhaya
Okokuqala, kungaba kuhle ukuhlobisa indawo yomkhosi. Faka isihlahla sikaKhisimusi ekamelweni, u-Hang Year Unyaka omusha namabhola. Kubalulekile ukukhonza itafula kahle, futhi izitsha ezilungiselelwe ungahlela ukukhonza kwangempela. Isibonelo, beka ama-saladi njengesibonakaliso sonyaka omusha noma umane udwebe amapiramidi angavamile ekudleni. Qinisekisa ukuthenga izipho zabanqobile emincintiswaneni. Akudingekile ukuthi usebenzise i-TV yomculo wehlwayi. Lungiselela izingoma zezingane mayelana noNyaka Omusha nobusika futhi zizenzeke njalo kusihlwa. Yiqiniso, uma izivakashi zakho zithola ukuthi ukudansa kumculo onjalo akufanelekile, khona-ke ngalesi sikhathi ungagcwalisa izifiso zezivakashi.
Nika isivakashi ngasinye umsebenzi wokulungisa imaski yangempela kanye nenye isici sesilwane esibonisa unyaka ozayo.
Ngemuva kokuthi zonke izivakashi zihlangene, bheka unyaka omdala. Yilowo nalowo makabe nesibonakaliso sonyaka ophumayo ngendlela efanayo. Ukudweba okumnandi kakhulu - umklomelo. Cabanga nge-horoscope ehlelekile kumuntu wonke futhi ufunde phakathi kwama-toast uphinde udle izidlo eziphekiwe. Kuyoba ngaphezulu uma ngabe "umdwebi wezinkanyezi" kusengaphambili ushintshela isitifiketi esifana nesambatho sezinkanyezi. Isibonelo, ungakwazi ukugqoka isigqoko esifane nesigqoko ne-raincoat.
Qinisekisa ukuthi ngandlela-thile usebenzise isisindo sonyaka ozayo, ake wonke umuntu athi ukuhlangana nalesi silwane, futhi ukudala okuzokwenza kakhulu kule nkcazelo enhle yesilwane esibi.
Beat the chimes. Siphulukisa i-champagne futhi sihlangabezana noMnyaka Omusha! Ungakhohlwa ngemidanso, ama-toasts nokudla. Sikhumbula ngezikhathi ezimnandi ezidlule, sihleka.
Lungiselela amaqiniso noma amasiko athakazelisayo ngokugubha konyaka omusha kubahlali bezinye izizwe. Futhi ungakwazi ngisho nokulandela ezinye zazo. Isibonelo, uma kwelinye izwe kuNyaka Omusha ukudansa ngebhokisi ekhanda lakho, ke ake umuntu enze lo mdanso, athi amagama ambalwa ngolimi lwabo (Yebo, amagama kufanele alungiselelwe kusengaphambili).
Isethulo sokuncintisana. Izivakashi zihlukaniswe ngamaqembu abantu abangu-3-4, ukuqagela igama noma inkulumo kubo, futhi kumele bahambise izimpahla zabo. Ithimba elizokwenza lokhu kungcono futhi kumnandi ngaphezu kwakho konke ukunqoba.
Ukudansa, ukudla, ukuphuza
Indabakwane nge-turnip. Nika isivakashi ngasinye indima futhi ake wonke umuntu adlale umdlalo wakhe ngaphansi kwesilungiselelo sakho esihlakaniphile. Yiqiniso, le ndaba idinga ukuguqulwa, engeza izikhathi ezimnandi nezenzo. Ungakhohlwa ukufaka izikhathi ezinjalo, isibonelo: "i-mouse iwa" futhi umenzi wakho wendima yegundane kufanele awele njalo njalo. Bonke babengabantu abakhulu, sonke kufanele sinikeze ngemiklomelo yomsebenzi onzima. Yiqiniso, esikhundleni sale ndaba, ungasebenzisa noma yikuphi omunye ngokuqonda kwakho.
Manje, manje, uma izivakashi zihlezi ukhathele futhi zanelisekile ebusweni babo zaqala ukugubha amehlo, ngakho-ke kubalulekile ukuhlakazeka kancane bese ulungiselela umbhede. Ngemuva kwemizwelo, wonke umuntu udinga ubuthongo obuhle ukuze aphinde aphinde ahlangane futhi axoxe ngeqembu lokugcina lonyaka omusha. Unyaka Omusha Ojabulisayo!
Indlela yokuhalalisela abangane bakho ngomnyaka omusha
Imidlalo yomnyaka omusha wabangani
Isimo: Unyaka Omusha esibhedlela
Ukunakekelwa Kwamehlo Nekhompyutha
Okufanele ukwenze kusihlwa: uchungechunge oluhle kakhulu wezokudlala
Yeka indlela enhle yokwenza i-napkins yeholidi?
Lungiselela ama-sleigh ehlobo: kuyoba yini ubusika 2015-2016?
Mask sikaNyaka Omusha weCarnival
I-sequel eya ku- "Dark Knight" izokwenziwa ngo-2009?
Mayelana nezinzuzo zocansi ngomzimba
Umdwebi ohloniphekile uNatalika Karpa
Imithetho yokunqoba inhliziyo yomuntu wamaphupho akho
Ama-champignons ashesha nge-pepper
I-Horoscope Yezinhlanzi-Abesifazane Ngo-February 2017
Indlela yokuxoxisana: akukho imali eningi
Iresiphi yamaqebelengwane angama-chocolate nge-pecans
I-Vitamin isiphuzo okusajingijolo kanye ne-lime
Isithonya sobulili emzimbeni wesifazane
U-Timati noKirkorov bathatha isiqeshana sokuqala sokuhlanganyela
Yini engingayithola ekude? Izinzuzo nezindleko ngezindlela ezehlukene
Indlela yokuncelisa ingane ukubopha isilenge
Imiphumela, i-capsule effect Spa
Yini ongayinika ingane yonyaka omusha enkulisa?
Izakhiwo eziwusizo ze-avocado nezithelo zothando